News Collection: प्राकृतिक गर्भनिरोधक ढुक्क बन्ने स्थिति हुन्न
काठमाडौ, फाल्गुन ६ - स्खलन हुनुअगावै बाहिर वीर्यपात गरेर प्राकृतिक परिवार नियोजनको विधि अपनाउने धेरैजसो नेपाली दम्पती गर्भपात गराउनुपर्ने बाध्यतामा पर्ने गरेका छन् । विदड्रल समेत भनिने प्राकृतिक परिवार नियोजनको यो विधिअन्तर्गत पुरुषले आफू उत्तेजनाको चरम सीमामा पुग्नुअघि नै योनिबाहिर वीर्यपात गर्ने गर्छन् ।
'बाहिर स्खलन गर्नु नेपालमा बढी चलनचल्तीमा रहेको प्राकृतिक परिवार नियोजनको साधन हो,' वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. भोला रिजाल भन्छन्, 'तर दुःखद् कुरा, सबैभन्दा बढी विफलताको दर यही प्रक्रियामा देख्न पाइन्छ ।'
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का अनुसार विकासोन्मुख राष्ट्रका करिब २० करोड दम्पती बच्चा जन्माउन ढिलो गर्दा वा रुचि नहुँदा पनि गर्भधारण रोक्ने भरपर्दो उपाय गर्दैनन् । परिवार नियोजनले असुरक्षित गर्भपतनलाई समेत रोक्छ । विदड्रल परिवार नियोजनको अति कम प्रभावकारी तरिका हो किनभने लिंग बाहिर निकाल्ने उपयुक्त समयको निर्धारण गर्नु अत्यन्त मुस्किलको कुरा हो । गर्भपतन गराउन खोज्ने धेरैजसो महिला बालबालिका भइसकेका र पुरुषद्वारा अपनाइने विदड्रल प्रक्रियाले गर्दा गर्भवती हुने गरेको डा. रिजाल बताउँछन् ।
'विदड्रल प्रक्रियामा गर्भधारणको जोखिम सबैभन्दा बढी मात्र हुन्न, हाम्रो प्राक्टिसमा यस्ता प्रक्रियाद्वारा गर्भवती भएपछि गर्भपातको शरणमा पुग्ने बाध्यतामा पर्ने महिला धेरै छन्,' परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालकी निर्देशक डा. शिला बर्मा भन्छिन्, 'हामी यो प्रक्रियामा भर पर्ने सल्लाह कसैलाई दिँदैनौं ।'
विदड्रल प्रक्रिया अपनाउने दम्पती वा यौन साथीहरूबीच सन्तुष्टि सम्बन्धीसमेत मिश्रति प्रतिक्रिया देखिएको छ । यस्तो प्रतिक्रिया भने महिला र पुरुष दुवैतर्फको छ । डा. रिजालका अनुसार, कुनै बाध्यताका कारण यो प्रक्रिया अपनाउने दम्पतीहरूमा यौन असन्तुष्टि बढी पाउने गरिएको छ । विदड्रल प्रक्रियामा यौनरोग सर्ने जोखिम समेत रहेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, 'पूर्ण सन्तुष्टि नपाउनु, गर्भधारण हुनु, यौनरोग सर्ने जोखिम हुनु आदि समस्याले गर्दा गर्भनिरोधको लागि सकेसम्म यो प्रक्रिया नअपनाउनु नै पूर्ण सुरक्षित हुनु हो ।'
महिनावारी सुरु हुनुभन्दा करिब १४ दिनअघि महिलाले अन्डा विसर्जन गर्छन् । यही मान्यताका आधारमा रिदम प्रणालीमा महिलाहरूले महिनावारीको पहिलो दिनदेखि १४ दिनसम्मको समय गन्ती गरून् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । 'यो अवधिमा महिला या शारीरिक सम्पर्कबाट बच्नुपर्छ वा गर्भधारण नगर्न कन्डम जस्तो कुनै विधिको उपयोग गर्नुपर्छ,' डा.बर्मा भन्छिन्, 'यो विधि पनि भरपर्दो छैन, अनियमित महिनावारी हुने, लामो महिनावारी हुने जस्ता थुप्रै कारणले यसमा भर पर्न गार्‍हो पर्छ ।'
रिदम प्रणालीको असफलताको दरसमेत उच्च रहेको उल्लेख गर्दै डा. रिजाल भन्छन्, 'सामान्य महिलामा महिनावारी भएको १४ देखि १८ दिनसम्म अन्डा निष्कासन हुन्छ । सामान्य चक्र रहेकाा महिलामा यो सम्भव देखिए पनि सबैका लागि भने यसै भन्न गार्‍हो नै छ ।' यो प्रक्रिया अन्तर्गत सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारो छोटो महिनावारी समय वा ढिलो गरी महिनावारी हुनेहरूलाई हुन्छ । यो क्यालेन्डेर जारी राख्दा समेत असफलता दर उच्च रहेको उल्लेख गर्दै रिजाल भन्छन्, 'कतिलाई महिनावारी भएको पाँच/छ दिनमा र कतिलाई चौबीस/पच्चीस दिनमा समेत गर्भवती भएको पाएका छौं ।' जुन महिलाको महिनावारी चक्रमा अनियमितता हुन्छ वा जसको चक्र हरेक महिना समान दिन हुँदैन, उनीहरूले रिदम प्रणालीमा ढुक्क
पर्नु हुन्न । पाठेघरको मुखको स्रावको बाक्लोपना परीक्षण गरेर समेत प्राकृतिक गर्भनिरोधको विधि चलनचल्तीमा छ । यो विधिअन्तर्गत अन्डा निष्कासनको समय वा यसको नजिकको समयमा पाठेघरबाट निस्किने स्राव -म्युकस) पातलो र टाँसिने हुन्छ । यसैले यदि तपाई गर्भधारण गर्न रुचाउनुहुन्न भने चिप्लो स्राव निस्केका बेला शारीरिक सम्पर्क नगर्नुस् । स्राव बन्द भएको दुई दिनसम्म पनि यौनसम्पर्क बन्दै राख्नुस् । यो विधिअन्तर्गत औंला वा ट्वाइलेट पेवरबाट योनिस्रावलाई परीक्षण गर्न सकिन्छ । यो स्रावको घनत्व हेर्नुपर्छ र यसलाई दुई औंलाले थिचेर समेत चिप्लोपन थाहा पाउन सकिन्छ । तर यो पनि भरपर्दो उपाय होइन । 'स्राव कति दिन हुन्छ भन्ने थाहा पाउन अप्ठ्यारो छ,' डा. रिजाल भन्छन्, 'यसबारे स्त्री रोग विशेषज्ञहरूलाई समेत ज्ञान हुँदैन भने सामान्य युवती र महिलाले के गर्न सक्छन् ?'
'शरीरको सामान्य तापक्रमभन्दा एक डिग्री बढ्नु अन्डा निस्केको बेलासँग सम्बन्धित छ,' डा. रिजाल भन्छन्, 'यो प्रक्रिया अपनाउनुसमेत सर्वसाधारणको वश बाहिरको कुरा
हो ।' अचेल सन्तान नहुनेले यो प्रक्रिया उपयोग गरेर अन्डा निस्केको दिन निरन्तर सम्पर्क राखेर गर्भधारण गर्ने बढी मौका पाउने गरेका छन् । यो उपाय परिवार नियोजनका लागि भने नेपालमा खासै उपयोग गरिँदैन । बिबिटी प्रक्रिया अन्तर्गत हरेक बिहान उठेलगत्तै महिलाले आफ्नो शरीरको तापक्रम नोट गरेर चार्ट बनाउनुपर्छ । यो चार्टले जुन समय शरीरको तापक्रम बढेको देखाउँछ त्यो दिनसहित आगामी सात दिनसम्म सम्पर्क गर्दा गर्भधारण हुने सम्भावना नरहने मान्यता छ ।